Igumbi lokuhlambela elilumkileyo eIndiya liyabutshintsha ubomi babantu | WOWOW IiFaucets-WOWOW IiFaucets
Ikhaya / Blog / Indlu yangasese enobulumko eIndiya iyabutshintsha ubomi
Indlu yangasese enobulumko eIndiya iyabutshintsha ubomi
2020 / 09 / 14 uhleloBlog 6814 0
Ndikwindawo yamatyotyombe eFaridabad, eIndiya, emazantsi eNew Delhi, ndiphonononga iigunds zomntu ogama linguMayank Midha. Emva kwethu kukho iphuli emileyo yelindle. Ngapha ngasekhohlo kwethu ziindlela ezityibilikayo kunye neendawo zokuhlala ezixineneyo zetyotyombe, izahlulo zangaphandle zezakhiwo zezitena zodaka ezipeyintwe kwiintsomi ezaphukileyo, iYellows, i-aquamarines kunye neeblues. Ukulahleka kwe-canine laze ujikeleze, kunye ne-chortle yabantwana kwaye ubaleke wehle iipaseji. Ivumba livuza ukusuka kwindawo evulekileyo yokuhambisa amanzi amdaka eqingqiweyo kwiindlela zokuhamba ezenziwe ngothuli lwamatye. Kumnyango omnye, kukho intombazana egobile ihlamba izitya phantsi.
Izitishi zokuhlambela, ezimalunga nobungakanani beebhogi ezinokuthuthwa, zenziwe ngekhonkrithi, i-porcelain kunye nentsimbi enerusi. Ndihamba ndisiya ezantsi kumqolo ukuzama ukuvula ukuvula nganye ukujonga ngaphakathi. Emva kokusetyenziswa kweenyanga ezili-12 kuphela, uninzi lwazo zangasese zizele lilindle, zihluthwe izinto, zitshixiwe zivaliwe okanye umxube wezithathu. Iintsapho ezikufutshane, ziqaphela umdla wethu wobugwenxa babo obonakeleyo, zisixelele ukuba ngamanye amaxesha bayazithuma kwindawo ekufutshane nenkunkuma esasazeke njengendawo yokubambela.
Kulizothe noko. Uninzi lwezihlandlo ozibonayo akukho kukhanya, akukho kuhamba komoya, iigogs zonakaliswa. Kukho ubumdaka kuyo yonke indawo, kuvaliwe, ”utshilo uMidha, umseki kunye neCEO yesiqalo esitsha esifanelekileyo sococeko esaziwa ngokuba yiGarv Bogs. Unobuso bobukhwenkwe, ubukhulu, amehlo omntu ochaphazelekayo kunye nebhokhwe engenamikhono kunye nemadevu. Usinika elubala esithi: “Ilusizi kakhulu, iyadandathekisa.”
I-Indiya inesihloko esingenathamsanqa sokuba ikomkhulu le-defecec evulekileyo kwihlabathi. Malunga ne-344 yezigidi zabantu eIndiya abanalo ungeno oluqhelekileyo kwiibhokhwe-leyo iphantse ibe nye kumaIndiya ama-4. Inkulu kakhulu kunabo bonke abemi baseMelika.
Iibhokhwe ezisebenzayo zingaphezulu kokuthuthuzela kokuqala; zibaluleke kakhulu ekuhlaleni kakuhle. Qho ngonyaka, abantu abangaphezu kwe-126,000 e-India-uninzi lwabo ulutsha-babulawa zizifo zorhudo ngenxa yezococeko, ekuphenduleni kwiQela leHlabathi leHlabathi eliLungileyo. Ilindle lale mihla ligcwele ziintsholongwane kunye nezinto ezincinci, ezinakho ukuhambisa izifo kunye nekholera, isifo segazi, isifo sesibindi, isifo sephepha kunye nepoliyo ngeebugging eziphaphazelayo ezifika kwiidiphozithi okanye xa ilindle lingcolisa amanzi. Izenzo zokucoceka ezimbi, njengokungahlambi iminwe, zixhaphakile kwimivuzo ephantsi nasezilalini, zisenza ukuba ezi ndawo zichaphazeleke ngakumbi kwizigulo, kunye necoronavirus ebangela i-COVID-19.
Amantombazana kunye nabasetyhini bacinezelwa ukuba basekele imihla yabo yemihla ngemihla ukujikeleza oku kungabikho kweebhogi. Amantombazana avuka kwangoko ngaphambi kokuntwela kokusa ukuze azinciphise ukuze angahambi emehlweni, angcungcuthekiswe okanye adlwengulwe. Xa kungekho mabhogi aluncedo okanye iiphedi zococeko ezinokufunyanwa kwiikholeji, abasetyhini baya kungena endlwini ngexesha losuku basebenzise igumbi lokuphumla kwaye beqe izifundo zizonke ngexesha labo.
Le mingeni mikhulu kwaye idityanisiwe uMiriha ujongene nayo. Unjineli oneminyaka engama-37 owayesakuba yinjineli yesoftware kunye nomthonyama waseFaridabad, uchithe iminyaka emihlanu edlulileyo esenza into anethemba lokuba yindawo yokuhlambela yoluntu. Ngesiqalo sakhe sobuchwephesha, wenza iigogo ezinomlinganiso ofanayo nanjengoko ezi zinto ziluncedo xa zisenziwa ngesinyithi ukuze zibenze bonakalise ukonakaliswa, kube lula ukuhlamba kwaye bakwazi ukumelana nokusetyenziswa okunzima ngaphandle kokuwela ecaleni. Iimfashini zakhe ezongezelelweyo ezicokisekileyo zamkela ii-real-time sensors ukulandelela ukuhlamba izandla, ukusetyenziswa kwamanzi kunye nokuhlambela. Olu lwazi lunika amagosa okuhlala kakuhle ngolwazi olungenakuthelekiswa nanto kwezempilo kwaye aqinisekisa ukuba izibonelelo ziyasebenza.
Amakhwenkwe ama-4 ahamba-hamba ngaphambili kwelinye lamaqela e-decrepit group bogs ngaphakathi kwamatyotyombe aseFaridabad, e-India.
UJames Martin / CNET
Ifemu yakhe, esekwe ikakhulu kwindlu enesitayile esebenza eFaridabad, engasuswanga etyotyombeni, uqeshe abasebenzi abangama-29 kuphela. Isikali semicimbi abajongana nayo inkulu kwi-rustic ye-1.3 yezigidigidi, ilizwe lesibini elinabantu abaninzi emhlabeni. Uninzi lwefashoni yakhe yongezwa ubuncinci iipesenti ezingama-25 kunezona zinto zixhaphakileyo, ngenxa yoko akunakulindeleka ukuba uMidha abe nakho ukwenza ezinye iigogo ngokukhawuleza. Ngokufanelekileyo kunokuba woyikiswe yile miqobo, uthi uyibona njengenye indlela enkulu yeshishini. Unokulinganisa kwinqanaba lenkqubela phambili esele ifezekisiwe.
UGarv, ophakamisa isidima ngesiHindi, kwinyanga ephelileyo ubhiyozele ukuseta kwayo kwe-1,000th, ngeebogs ngoku kwiindawo zamaqela, kwiikholeji nangaphandle kwezakhiwo zabasemagunyeni. Phantse abantu abangama-200,000 bazisebenzisa yonke imihla, kunye nabantwana abancinci abangama-60,000.
"Ndibone utshintsho olukhulu ngaphambili kwiminyaka emithathu ezantsi," utshilo uMidha kwindawo yakhe yokusebenza kulandela ukuya ematyotyombeni. Uthi abantu abaninzi abongezelelweyo banokungena kwiibhokhwe ezingazange zenze ngaphambili. Ekhankanya enye kuzo zonke iinkqubo zefemu yakhe, wongeze wathi: "Ezi bogogo ziluncedo, abantu bayazisebenzisa, ngenxa yenyani yokuba abomthonyama beziphathamandla zomzimba, bakhuthazekile kwicala lokucoca, kwicala lokugcina ezi bogs . ”
"Asisebenzisi indawo yokuhlambela kawonke-wonke nangayiphi na indlela kuba bakude kwaye bangcolile ngokwenene," utsho uMaya, ibhinqa elineminyaka eli-16 ubudala elihlala kwinkampu yeentente.
Umsebenzi wakhe ukongeza awumi wedwa. Abasemagunyeni eIndiya basebenzise amashumi ezigidi zeedola ukubhengeza ucoceko oluphezulu phantsi kwenkulumbuso yeNkulumbuso uNarendra Modi iSwachh Bharat, okanye i-Clear India. Umzamo weminyaka esixhenxe - owakhe izindlu zangasese ezingaphezulu kwezigidi ezili-100 kwaye wakhokelela ekwehleni okukhulu kwindlu yangasese evulekileyo-sisivumelwano esikhulu kangangokuba i-India yashicilela uphawu lwe-Swachh Bharat kwi-forex yayo. Iibhodi zeebhodi malunga nokuthunyelwa zityatyekwe kulo lonke ilizwe, kwaye iphulo lokuthengisa lichukumise ifilimu eyaziwa njengeGumbi lokuhlambela: Ibali lothando. Le nkqubo ibangele ukuphuculwa kwezococeko, kunye neMephu zikaGoogle ezenza ukurekhoda ngaphezulu kwe-57,000 kawonkewonke i-India.
Nokuba yeyiphi na le migudu, uninzi lwabantu esixoxa ngalo kulo lonke ityotyombe luyacaphuka kakhulu, besithi urhulumente womanyano ebengazinanzi izicelo zabo zeminyaka ecacileyo nezisebenzisekayo. Njengoko ndibona ngaphakathi ematyotyombeni, ukonakala kunye nokungcola kweebogs kubi ngaphezu kokungabinazo.
"Ngapha koko ndifuna igumbi lokuphumla elicocekileyo," u-Maya oneminyaka eli-16 ubudala, ohlala kwintente yohambo ngoohola bendlela, uxelela umguquleli wam ngesi-Hindi. Uphethe isikhafu esimenyezelayo esi-pinki esine-checkered nemfusa salwar kameez, uxakekile esenza isacholo somqala ngelixa ehleli phantsi kwentente eblue-tarp. “Asisebenzisi igumbi lokuhlambela likawonke-wonke ngokubanzi nangayiphi na indlela kuba bakude kakhulu kwaye bangcolile ngokwenene. Udadewethu [utatomkhulu] ukongeza usebenzisa indawo evulekileyo. Kwibhafu yethu nayo siyifezekisa ngokubopha umjikelo wezinto kunye nokusebenzisa ibhakethi lamanzi kwindawo evulekileyo. ”
Ndaye ndaya eNew Delhi kwakhona ngoFebruwari, kwiiveki nje ezimbalwa ngaphambili kune-coronavirus lockdowns, ukuze ndifundiswe ngokwam malunga neli phulo lokuphelisa ucoceko oluvulekileyo eIndiya. Kwiinyanga kamva, lo msebenzi wokusindisa ubomi ngeebhogi uhlala usaqala. "Kunokubakho utshintsho olukhulu olwenzekayo ngoku," utshilo uMidha.
Wamkelekile kwiSpacehip Bathroom
Kukho umbala omnyama wepesika owakha kumhlaba wasePragati Maidan, malunga neenkomfa ezili-150 zentliziyo yenkomfa ngaphakathi kwentliziyo yeNew Delhi. Izahlulelo zangaphandle, ezinamakhonkco ekhonkrithi ehamba ze, zibonakala ngathi nguJackson Pollock wema kunye nepeyinti emdaka ngombala ejikeleze ngaphandle. Nangona kunjalo eli qokobhe lingathandekiyo liyinyani ngaphakathi ngaphakathi: isithsaba esimenyezelayo sobukhosi begumbi lokuphumla elincinci likaGarv Bogs.
UNeha Goel, umphathi omkhulu oneminyaka engama-37 ubudala eGarv, uyandibulisa ekungeneni kwezindlu zangasese zikawonke-wonke ngaphambili ezazingasasebenzi uGarv azibhalileyo. Sihambahamba ngaphakathi kwaye ijongeka ngathi ingaphakathi kwesiphekepheke.
“Nabani na osebenzisa igumbi lokuhlambela uzakufumana igumbi lokuhlambela elicocekileyo nelicocekileyo,” utshilo uGoel, obaleka ngokungathandabuzekiyo uluhlu lwezibalo zangasese, utshilo ngelixa ebonisa igumbi lokuphumla lamanenekazi anekamva.
Ngokuqinisekileyo enye yezindlu zangasese ezingenazintsimbi zikaGarv Bogs kwintlanganiso yenkomfa yasePragati Maidan eNew Delhi, eIndiya.
Izahlulelo zenziwe ngentsimbi engenasinyithi ecekeceke, eneetafile zesinyithi, iigogo, imichamo, iisinki kunye neetephu. Iminyango engaphandle yesinyithi ebonakala ngathi ifanelekile endlwini kwiziko lezemali. Imicu ye-faux engenamava nengca ecaleni kwesahlulelo siqhekeza ubuhle bokuthengisa.
Phakathi kwezinto onokukhetha kuzo zixhaphakile kwiindawo zokusebenzela, ezinje ngeebhokisi ze-autoflush kunye neetephu zokuntywila ezenzekelayo. Nangona kunjalo iinxalenye ezahlukileyo zingaphezulu kunoko ubonayo nakweliphi na iziko loluntu laseMelika, ngokufana nezivamvo ezixhonywe kumakhadi okudlala e-SIM kuzo zonke iivenkile kwaye ucofe ukondla ulwazi lwexesha lokwenyani malunga nokusetyenziswa kwamanzi, ukuqhuma kunye nokugcinwa okufunwayo kwideshibhodi kaGarv.
"Ngelixa uhleli ngaphakathi kwindawo yomsebenzi, uya kufumana ulwazi oluninzi," utshilo uGoel. “Umzekelo, uya kuyazi indlela abantu abaninzi abasebenzisa ngayo igumbi lokuhlambela, zingaphi izihlandlo apho ifunyenwe igungxuliwe, bangaphi abantu abazihlamba ngokwenene iminwe yabo kwaye ukuba kukho nakuphi na ukungasebenzi kakuhle, umzekelo ukuba igumbi lokuhlambela liza kuvalwa okanye ukuba siyabaleka uphume emanzini. ”
UMidha kamva undixelela lonke olo lwazi lunceda uGarv ukuba aqiniseke ukuba ii-bogs zakhe zigcinwa ngokuchanekileyo kwaye nakuphi na ukungasebenzi kakuhle kuyakhawuleza. Kwaye idatha iveza ulwazi olungenakuthelekiswa nanto emsebenzini kaGarv wokufikelela kuluntu.
Imbinana yeenketho ezakhiwe kwiibhokhwe ezilungileyo zikaGarv.
URob Rodriguez / CNET
"Kusinceda ukwakha ireferensi eyomeleleyo kwiqela," utshilo uMidha. "Ukuba senza amanyathelo okuhlanganisa amaqela, sonke siyayazi eyona nto iphambili kweli qela. Nokuba kukuhlamba izandla, sisebenza nabo ngokukodwa kwicala lokuhlamba izandla. ”
Izitali eziqheleneyo neebhokhwe ezikwi-squat ezi-degree kunye nomhlaba-hayi i-Western sitdown bogs - zamkela inkqubo yokugungxula okuzenzekelayo kunye nokucoca umhlaba. I-Goel ibonisa ukuba isebenza njani le nto, ivula itafile ukubonisa indlela phakathi kokusebenzisa inzwa ecaleni kodonga okubangela inkqubo yokufaka imibhobho yokugcwalisa umhlaba wentsimbi ngamanzi acoca ngokukhawuleza. Njengoko ehamba ngaphakathi, izibane zesilingi zicofa kwaye isivamvo esifana nesaso sixelela igumbi lokuhlambela ukuba lizikhusele kwangoko kunokuba linyuke ngaphezulu nasemva kokuba linyukile. Ngelixa ucango lwetafile lutshixiwe, umntu “onoxanduva” onomphezulu phezu komhlaba utshintsha ukusuka kumava angenamava ukuya emfusa.
Ndindwendwela indlu yangasese kwiintsuku nje ezimbalwa emva kokuba ivulelwe uluntu ngokubanzi. Nangona kunjalo, ikwangumbane, nezibane ezizenzekelayo zicima ngokukhawuleza kwindawo yokukhubazeka, ukucocwa komgangatho ogcweleyo ophuphumayo kunye nomchamo we-auto-flush ongakwaziyo ukuseta. Nangona kunjalo ngalo lonke ixesha uGarv ephucula ii-bogs zakhe, iya kufumana inyathelo elinye kufutshane nokwenza into inokuthi igqibe iminyaka emininzi, hayi iinyanga, ngokuqhekeka.
"Ungenelelo oluncinci okanye akukho nencwadana yesikhokelo iyafuneka ukuze kukhathalelwe eli ziko," utshilo uNeha ngokuzingca.
Olu khetho aluzi ngexabiso eliphantsi: Igumbi lokuhlambela elinye likaGarv elinendawo ebiyelweyo lingaba lixabiso eliphakathi kwe- $ 2,400 kunye ne- $ 4,900, malunga ne-25% enkulu kunefashoni eqhelekileyo, utshilo uMidha. I-Pragati Maidan retrofit yokuzibophelela yayiyeyona pricier, kwi- $ 50,000. (Iifemu ezahlukileyo zikhuthaza iigoli ezithunyelwayo ezenziwe ngeplastiki nezinye izinto ezingabizi kakhulu eziya nje kumakhulu ambalwa eedola.) Nangona kunjalo, uMidha uthi, iinkampani zenza ezi ntlawulo ziphambili ngokuhla kwamaxabiso okugcina.
Ukuwelda kwindawo yokuvelisa yeGarv Bogs.
Ukuba ezi bogs zisebenza ngokukuko, u-SR Sahoo, umphathi oqhelekileyo onendlu yenkomfa, uthi angathanda ukongeza ezinye iibhogi zesiphekepheke kwintsalela yokuqhubela phambili.
Ndithatha i-drive yokuthatha iyure ndisebenzisa iindwendwe ezixineneyo zaseNew Delhi ukuya kwindawo encinci yemizi-mveliso eFaridabad indawo uGarv akha kuyo iigogs zayo zobuchwephesha. Indlu yokwenza imveliso ligumbi elinye elikhulu, elonakeleyo elinamaqhekeza amhlophe ze kunye nomhlaba onodaka. Kwicala elinye kukho iindawo ezimbalwa zezitali zentsimbi kumanqanaba ahlukeneyo esakhiwo. Kuzo zonke kukho imfumba emxinwa yezinto ezingaphekwanga ezixineneyo ecaleni kodonga: imigqomo emibini emfusa, isipha sonke sezinto ezilahliweyo zesinyithi, izakhelo zeepikethi kunye nemfumba yemibhobho enothuli. Ngaphandle kodonga kwakhona, omnye umqeshwa udibanisa izinto zentsimbi kwaye omnye usebenzisa isangqa esibonwe ukusika isinyithi, kunye neentlantsi zomlilo ezithatha imifanekiso ngaphakathi emoyeni.
Iibhokhwe zikaGarv zenziwe siko ukudibanisa ukhetho olwahluke ngokupheleleyo. Iifashoni ezingabizi kakhulu zinobunzima obuncinci kufakelo lwesinyithi, ngaphandle kwee-flamboyant sensors in-built. Abanye bamkela iipaneli zemifanekiso yevolthi yokukhanya, kwaye ezinye ezingenakunxulunyaniswa nenkqubo yangoku yogutyulo lwelindle zisebenzisa ii-biodigesters eziguqula inkunkuma ibe sisichumiso sokulungisa umhlaba.
Nangona kunjalo yonke le teknoloji nangona kunjalo ifuna ukugcinwa ukugcina ii-bogs zicacile kwaye zisebenza. UMidha uthi ukhuthaza nawuphina umntu othenga iigogo zakhe ukuba abeke imali ukuze ayigcine, ngenxa yezibonelelo zakhe nazo zinokuwela kulungiso. UMidha ebesebenza ukufumana iikhontrakthi zokugcina izindlu zangasese azakhelweyo ukuza kuthi ga ngoku ukunqanda oko kungenzeki. Kokufaka kwakhe i-1,000, wathi malunga ne-680 Garv bogs zigcinwa ziphindaphindwa ngabasemagunyeni okanye kwikontraka kwaye i-422 yazo inexesha lokwenyani.
"Andazi ukuba iSIM khadi iza kunceda njani de ube unendleko zokubahlambulula," utshilo uKabir Agarwal, intatheli kwilizwe liphela yolwazi lwewebhu i-The Wire, esekwe ikakhulu eNew Delhi, obhale ngokubanzi malunga neSwachh Bharat.
Inkuthazo engenakwenzeka yegumbi lokuhlambela
UMidha unokubonakala engathandeki kangangokuba ungade umthinte ngokukhawuleza njengegcisa kunokuba ngumseki wezobuchwephesha kunye ne-CEO. Kwisithuba seenyanga ezili-12 sinxibelelane naye, uhlala egcinwe kwaye ejonge ubuso be-poker, phantse ngenjongo yokumangalisa. Xa wayencuma, yandibamba ngokungalindelekanga.
Kodwa xa ethetha ngokusebenzisa ubugs ukunceda abantu, ubushushu bakhe buqala ukuphuma kwigobolondo elinobulali. Amehlo akhe aqaqambile kwaye ajonge ngaphakathi kumgama ongachazwanga, nekamva eliphezulu. Unentliziyo efudumeleyo, enomdla kwaye uyakhawuleza ekucaciseni ukukhathazeka kwakhe malunga nemeko yeebhokhwe kwilizwe lakhe.
Abasebenzi bakhe bakwaGarv babonakala benomxube ofanayo wobuchule kunye nobungcali, kwaye bayancokola noMidha ngokumncoma. Ukuba ibingenguye uSwachh Bharat, eli qela labadlali abancinci belinokuthi basebenze ngokudibeneyo ekwakheni inkampani efumana inzuzo okanye banyuke ileli yeenkampani eziphambili. Ngenye indlela, bayishiya loo minqweno yokungena kugutyulo lwelindle, indawo ekungaqondwa kakuhle kuyo nehlonitshwa ngokugqithileyo, kwaye bajongane nomba omkhulu kangaka nowenzelwe ixesha elide. Iinjongo zabo zinokuba yinto engenakulindeleka, bacinge igumbi lokuhlambela elisezantsi nelingahoywanga ngqo kumboniso wobuchwephesha kunye nomba wobungangamsha.
Umsunguli we-Garv Bogs kunye ne-CEO uMayank Midha kwiindawo zokuqala zomsebenzi eFaridabad, e-India.
Nangona kunjalo ayisiyothando. Kungabakho imithwalo yemali eninzi enokwenziwa njengoko iibhiliyoni zeedola zingena kumalinge ezococeko eIndiya. UMidha akarhwaqeli emva kwezi nkcukacha, esithi iyasebenza kuphuhliso lweshishini lakhe, kubandakanya nokuba wenza ngabom uGarv ngenzuzo ukuze itshintshe ibe nokuzinzileyo kwaye angaze axhomekeke kwizibonelelo.
Kwaye ngokulula ukuza kuthi ga ngoku kwakungekho lula. Olu hambo lweminyaka emihlanu lwalusisiqhamo sezinto ezimbini ezibalulekileyo ebomini bakhe eziza ngokudibeneyo: ishishini likayise kunye noqeqesho lwakhe.
Xa uMidha wayeyinkwenkwana, utata wakhe waqala ukuvelisa inkampani eyaziwa ngokuba ziiNjineli ze-SS ezenza izinto zentsimbi ezisebenza ngombane, izixhobo zonxibelelwano kunye neendlela zeHVAC. Kuzo zonke iinyanga zokuqala zikaMidha kwi-faculty, utata wakhe, owayengasasebenzi kakuhle, wasweleka eneminyaka engama-12. Waye wazokuncedisa kwishishini lasekhaya ngelixa esenza umsebenzi wakhe wesikolo, kwaye umama wakhe, owayengumqeqeshi, wathatha indawo indibaniselwano.
Uphumelele e-2005 kwaye wathatha umsebenzi njengenjineli yenkqubo yesoftware yaBaboneleli ngeeTata, i-IT yehlabathi kunye nokubonisana namashishini, nangona kunjalo washiya iminyaka emibini kamva. "Ndiyazi ukuba yenye into ekufuneka ndiyenzile, utshilo. "Ndidinga ukukhulisa into yam."
Ungene kwinkqubo ye-MBA yeZiko loLawulo lwaseMaphandleni, indawo apho umsebenzi wakhe kwiindawo ezihlwempuzekileyo wamguqula wakhonza kwelona thamsanqa lincinci kuthi. Umama wakhe uthathe umhlala phantsi kwishishini lendlu kwaye wayithatha, nangona kunjalo uyavuma ukuba akaphumelelanga kuyo.
Kwangaphambi kokuba ishishini liwele ecaleni, wathatha abathengi bezonxibelelwano abayalela ukuba kungangeni uthuli, kungangeni manzi kunye nokonakaliswa kwento ukumelana nesinyithi ukulungiselela izixhobo ezibuthathaka kwiiwebhusayithi zeseli yenqaba. Emva kokuba umsebenzi ugqityiwe, bekukho nje ezinye zeekhabhathi ezihleli zijikeleze indawo yokuvelisa.
"Yile ndawo indibethileyo leyo yokuba sinakho ukwenza iibhokhwe ezinokuthuthwa ezinokuthi zenziwe ngesinyithi," utshilo uMidha.
Uxinzelelo lokuzama into enye entsha emva kokubukela ishishini likayise liza ecaleni, uMidha uqaphele umsebenzi weSwachh Bharat, ngemali zawo ezinkulu kunye nenqanaba lentlalontle loluntu, njengeyona ndlela ifanelekileyo. Waqala ukuhlalutya imeko yezococeko eIndiya kwaye wamangaliswa kukusweleka, ukugula kunye nobunzima obabububangela. Wazimisela ukuba olu yayilubizo lwakhe olutsha: ukwakha indlu yangasese kawonkewonke engenakonakala. Uye waxoxa ngamacebo kwitafile yesidlo sangokuhlwa kunye noMegha, iqabane lakhe kunye nesithandwa samabanga aphakamileyo, emva kokubeka intombi yabo kumatrasi. UMegha, ongezelelweyo njengenjineli yenkqubo yesoftware, owasekwa nguGarv kwaye ucebisa uMidha ngamanyathelo ngelixa esebenza kwinkampani yexesha elizeleyo.
Ukwenza kuphela ukwakhiwa kwesinyithi kwakulula ukuba abachasi bakope, ngenxa yoko esi sibini songeze ukuhamba kwexesha lokwenyani kunye neenzwa zomjelo wamanzi kunye neendlela ezahlukeneyo zetekhnoloji ukwahlula igumbi labo lokuhlambela elilungileyo. Uphuhlise iprototype ngo-2015 kwaye waqala ukubeka umbono wakhe omtsha.
Iminyaka emibini enesiqingatha yokuqala ibinzima kakhulu. Amagosa abasemagunyeni, awayeqhele ukwamkela izinto eziphathekayo zekhonkrithi kunye nezitena, egqogqa umbono wokuba ukwakhiwa kwesinyithi kukaMidha kwakuyindawo yokuhlambela. "Abantu basibuza ukuba ngaba yindawo yokuthengisa ifowuni okanye into enye," kusho uMidha.
Emva kokufaka amatyala, uMidha wafumana ikhontrakthi yakhe yokuqala ngo-2017. I-Aga Khan Basis engenzi nzuzo yamcela ukuba akhe iindawo zakhe kumagunya okuqala nawasezikolweni e-Bihar, elinye lawona mazwe ahluphekayo e-India. Isiko leziko, elalifundisa malunga ne-400 abafundi beekholeji, lalingenazo iigogs eziluncedo. Iibhokhwe zeGarv, ezi-4 kuwo onke amaziko, nangoku ziphakanyisiwe kwaye ziyasebenza ngoku.
Kulungile ukubona uncumo ebusweni bamanenekazi nje bakubona izinto eziluncedo kwigumbi lokuhlambela lobuchule babo.
UMayank Midha, umphathi weGarv Bogs
UMidha waqala ukufezekisa indawo yakhe yokuhlambela kwaye wafumana izivumelwano ezongezelelweyo. Wayenethowuni yeenyanga ezili-12 ngo-2018, xa waphindaphinda iintlobo ezahlukeneyo zokufakwa kukaGarv ukuya kuma-700 kwaye wafumana ibhaso le-Unilever Younger Enterprise kwiLondon. Amanyathelo amatsha ngoku amkela ufakelo eGhana nakwinkampu yeembacu eTurkey, ukongeza kwigumbi lokuhlambela elenziwe ngabom kwisikhululo seDelhi Metro.
UMidha uthi kufuneka acinge ngeembumbulu zikawonke-wonke eIndiya njengeendawo zeqela, ezinendawo yokulungisa umhlaba, ezisebenzisa izixhobo zamanzi, ababoneleli bokuhlamba kunye nezenzo ezahlukeneyo, njengendlela yokukhuthaza ukusetyenziswa kunye nokukhuthaza ulonwabo lweqela kwiibhokhwe zabo.
Unokuba nempumelelo kwindlela yakhe kuloo mbono, kunye neqela elipheleleyo le-1000 labantu abasele basebenzisa ii-Garv bogs mihla le.
Ngaphezulu kweentsuku ezimbalwa ezilandelayo eIndiya, ndiyabona ukuba nokuba neebugs eziluncedo kunokuthetha ntoni kwiqela.
UGoel noNishant Agarwal, igosa eliyintloko lokusebenza kukaGarv, ndise kwisixeko sezolimo iKhair phakathi kwesithili saseAligarh e-Uttar Pradesh ukuya kuseta iigar bogs ezazakhiwe kwiminyaka emibini ngaphambili. Ukuqhuba ziiyure ezi-4 ukuphuma eNew Delhi, kwaye xa siphuma kuhola wendlela, isitalato esingalinganiyo sijikelezwe ziimayile zamasimi engqolowa angenamava aphawulwe ngamaplanga. Ecaleni kweyona ndlela intle, kukho abathengisi abancinci, abaphantsi abathengisa iichips, izikhafu kunye neembadada ezitratweni phakathi kwabasasazi beenqwelo zeziqhamo, abakhweli bezithuthuthu kunye neenkomo ezirhuqa iinqwelo ezixinene ngezitena.
Ngaphandle umgca we-Garv bogs ngaphakathi kwedolophu yasemaphandleni yeKhair.
Umgaqo wokutsala weKhair uxakekile kukuthengisa okuvulekileyo, iindwendwe kunye nabanye abantu abahambahamba ecaleni kwendlela yesitalato. Emgaqweni wendlela ngumqolo weebhokhwe, epeyintiweyo epinki ukubonisa ukuba ngamanenekazi (nangona imithwalo yamadoda iyayisebenzisa) kwaye konke okufana nomqondiso kaGarv Bogs, uphawu oluvunyiweyo oluhlaza oluhlaza "G" uphawu lubonwa nje nabani na ohambahambayo by. Ezi zibhogi, ezithengiweyo zaze zagcinwa sisixeko, ziphakathi kweefashoni ezingabizi kakhulu, eziphambili zefashoni, ke azamkeli izivamvo zexesha lokwenyani. Inenekazi eligama linguGuddi Devi lixakekile licoca ii-bogs emva kwako konke ukusetyenziswa. Ugquma iimpumlo kunye nomlomo kwisikhafu sakhe njengoko egalela amanzi emhlabeni nakwigumbi lokuhlambela emva koko awugalele ngomhlaba umhlaba kwaye avale ngamanyathelo okupakisha ngomtshayelo womququ.
Iibogs zisetyenziswa ngokufanelekileyo, enkosi ngokuyinxalenye kukhuthazo olungagungqiyo lweSwachh Bharat yenkqubo yezococeko ukongeza kwizohlwayo ezihlawulisiweyo zoku kufunyanwa kuphuma phandle.
“Sizakubona utshintsho oluninzi phakathi kweendawo zasemaphandleni. Kwangoko, wonke umntu wayesenza into evulekileyo, "u-Aatm Prakash Rastogi, igosa lokukhulisa ibhloko labasemagunyeni e-Uttar Pradesh, undixelela xa evala indawo yakhe yokusebenza njengoko exakekile etyikitya amaphepha edesikeni yakhe. Ngoku libala. ”
Ngosuku olulandelayo ndiye kwenye ityotyombe laseNew Delhi elinendawo enkulu enothuli ekhokelela kwivenkile encinci kunye neendlela ezixineneyo ezineempawu ezincinci. Ekungeneni, i-NGO yokugqibela yeenyanga ezili-12 yakha iiyunithi zeebhokhwe zamadoda nezamantombazana ezenziwe ngeporcelain kunye neminyango yeplastikhi. Iigogs zilula, akukho nto ikufutshane neenzwa kunye nesinyithi esiqaqambileyo sezona zinto zintle zikaGarv, nangona kunjalo zicacile kwaye zinokusetyenziswa, ngenxa yokufumaneka kwamanzi kunye nomsebenzi ozigcinayo.
Amy Yonghee Kim / CNET
Ndihambahamba ndisiya ematyotyombeni, ivumba elibi lendawo evulekileyo yogutyulo iyandibulisa. Apho, ndidibana nomchweli ogama linguRamjilal ngaphandle kwendlu yakhe exineneyo enegumbi elinye, efaka umatrasi kunye nokunye. Unwele kwaye uchetyiwe kwaye unxibe ivesti etshekiweyo ngaphezulu kwehempe edityanisiweyo, iblack kunye neflip-flops.
Uthi wonwabe kakhulu ngoku ekubeni amaqela eqela anokufunyanwa. "Bendihlala ndenza into evulekileyo, ngoku ndisebenzisa eli gumbi lokuhlambela," undixelela ngomguquleli.
Elinye inyathelo eliya phambili
Kwisithuba seenyanga okoko ndindwendwele uMidha, umsebenzi wam kunye nokuthathelwa ingqalelo kwehlabathi kujolise kwi-coronavirus. Ngalo lonke elo xesha, mna noMidha sasigcina unxibelelwano nge-WhatsApp, kwaye siza kuthetha ngamanyathelo akhe amatsha. Sisenokongeza sincokole ngamanye amakhaya omnye nomnye kwaye sinike amabinzana enkuthazo, kuba ilizwe lethu ngalinye lihlaselwe kakubi sesi sifo.
Kancinci iguqulwe kunye nomsebenzi wayo. Njengomntu ocofa i-tinkerer, uMidha uphuhlise iindlela ezintsha zokujongana nentlekele ye-coronavirus. Wongeze ukukhanya kwe-ultraviolet kwiiGarv bogs ukunceda ukubulala iintsholongwane phakathi kokusebenzisa. Undithumelele ividiyo nge-WhatsApp ngendlela esebenza ngayo. Izinwele zakhe ngaphakathi kwesiqeshana zazinde kwaye wayephethe iimaski. Uvula umnyango kwigumbi lokuhlambela kwindawo yokuvelisa enengxolo kwaye ubonakalisa ngaphakathi ukuhlanjwa ngombala omfusa.
Ukutshixwa kwe-COVID-19 kuye kwacothisa ukufakwa kukaGarv. Kwakudingeka ukuba aqalise ukunciphisa ukuhlawula kunye nokuhlehlisa ukuqesha ngexesha lokuqhuma kwezemali. Nangona kunjalo inyanga nenyanga, uye waqhubela phambili amalinge akhe phambili.
Ngelixa bendihlala ndindwendwela i-India, u-Midha wayehlala ejikeleza, ebeka i-bogs zakhe koorhulumente nakwiinkampani. Ngokuqinisekileyo omnye wabo wayengumqhubi wesikhululo samafutha. Kwiinyanga kamva, emva kokuba ndibuyile endlwini, loo bhidi yafika apha. Umdibaniselwano uyalele i-30 yepremiyamu ye-unisex yeebogs zakhe ezilungileyo ze- $ 200,000. La ngamanyathelo angama-30 ongezelelweyo ukuya kwintelekelelo kaMidha kunye nokuchazwa kwangaphambili kwekamva indawo yeebhokhwe yinto enye abantu abangayityesheliyo.
UMidha emi ngakwimigca yeebhokhwe ezonakeleyo kumatyotyombe aseFaridabad.
Xa mna noMidha sinokuxoxa, ndinokuthi ngokuthathela ingqalelo loo ndawo iseFaridabad kwaye ndimangaliswe yinto eyenzekileyo kubantu abahlala apho ngexesha lobhubhane kunye nendlela umsebenzi kaMidha ngoku obaluleke ngayo.
Ukugqitywa kwesinye sazo zonke iintsuku zethu ngokudibeneyo kumatyotyombe, kuba iseti yelanga kunye nomoya opholileyo, ndacela uMidha ukuba utata wakhe angalithatha njani ishishini lakhe ukuba uyaphila ukulibona. Ngaphandle kokuthandabuza, uthe: "Ndivakalelwa kukuba kuya kufuneka ukuba abe nekratshi ngokungaqhelekanga."
Sathetha ngala mini malunga nendlela evakalelwa ngayo xa uMidha ebonelela ngabantu abanesidingo sokuqala.
"Kuyabanzima ukucinga malunga necandelo leziphathamandla elinabantu abatsha abali-1,500, iziko lamanenekazi, elingenazinto zangasese," utshilo. “Kulungile ukubona uncumo ebusweni bamanenekazi nje bakubona izinto eziluncedo zokuhlambela kwicandelo labo. Njengenxalenye yeshishini, ukuba sisongeza ukwenza uhlobo oluthile lokuchaphazeleka eluntwini, ukuba siphucula ubomi ngokungathanga ngqo, kusanelisa kakhulu.
Ngaphambili :: Iibhokisi zegumbi lokuhlambela kwihlabathi liphela kunye neMarike yeShower ye-2020 yokuNgqina ukukhula okuKhulu ngo-2026 next: Ulwakhiwo lweSilumkiso seHlabathi seBhasikethi ye-2020
IiFaucethi zeBathroom eziGqwesileyo ngo-2021-Uphononongo kunye neSikhokelo sokuThenga
2022 / 01 / 20 557
Ngubani owenza iiFaucets zeTrustmi-Ngaba zilungile ngokoMgangatho
2022 / 01 / 17 1359
Ngubani owenza iiFaucets zeSoka- Konke malunga neSoka Brand
2022 / 01 / 17 1276
Uyilwa njani iKhabhinethi emxinwa kwikona ye-10cm yesitya sokuhlambela?
2022 / 01 / 17 1379
Ndiyazisola ngokufaka i-Underfloor Heating eBathroom, ndiye ndaqonda ukuba...
2022 / 01 / 17 1492
UmGangatho oyilwe kakuhle wakhupha amanzi kwigumbi lokuhlambela akhupha amanzi ngokufanelekileyo kwaye ajongeka kakuhle...
2022 / 01 / 16 1507